time for stupid new year
-- It's the most horrible time of the year.
I *hate* New year
Blahblahblah. It's stupid, because I love Mondays
Most people aren't funny, they aren't insightful,
I once ran into New Kids On the Block's
Why won't they letayear die without bringing inanew one on the instant,
can't they use birth control on time?
I want an interregnum. The stupid years.
It's The Social Media Time and Resources & New Policy from All
We've long known that celebrities do stupid stuff.
Lindsey Lohan, Britney Spears, .... Sexy Time
look closely at beliefs and assumptions that may get in your way of
I want to visit strange, exotic .
New Year's Eve party on Friday at why we all bother to waste our time on these .
the human race's most "devastatingly"
time to use some critical thinking skills,
you will most always lose in your life coming new day .
let's start the party for stupid New year .
Posted by phone myint at 8:59 PM2comments: Links to this post
Posted by phone myint at 5:30 PM3comments: Links to this post
ကျွန်တော့် ကို အရူး နည်းနည်းလောက် ရောင်းပါ
ကျွန်တော် ဟာ ရှောပင်းမောလ် ထဲ ဝင်
အခုလို သံကုန် အော်လိုက်တယ် ။
ကျွန်တော့် ကို အရူး နည်းနည်းလောက် ရောင်းပါ ။
(၁) ပထမ အရူးကို အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို လက်ဆောင်ပေးမယ်
(၂) ဒုတိယ အရူးကို လူ့အဖွဲ့ အစည်းကို လက်ဆောင်ပေးမယ်
(၃) တတိယ အရူးကို ကျွန်တော်လို့ နာမည်ပေးမယ်
ကျွန်တော့် ကို အရူး နည်းနည်းလောက် ရောင်းပါ
(၁) ပထမ အရူးကို အနုပညာ အတု လို့ပြောမယ်
(၂) ဒုတိယ အရူးကို ငါ့နှင့် ငါ၏ သောက်ရေးမပါတဲ့ အချစ် လို့ပြောမယ်
(၃) တတိယ အရူးကို ငါ၏ မွန်မြတ်သန့်စင်သော ကဗျာဖြင့် လောကဓါတ်အား ထွန်းလင်းစေအံ့ လို့ပြောမယ်
(၁) ပထမ အရူးကို အမေရိကန် သမ္မတထက် ပိုတော်တယ် ထင်နေတဲ့ ချစ်လှစွာသော ကဗျာဆရာ လို့ ပြောမယ်
(၂) ဒုတိယ အရူးကို ကမ္ဘာကို ကဗျာဖြင့် ထမ်းထားသော ဂရိ ပုံပြင် ထဲက ကဗျာဆရာလို့ ပြောမယ်
(၃) တတိယ အရူးကို ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ကိုးကွယ်သော ပျက်စီးမဲ့ ကဗျာဆရာ လို့ပြောမယ်
အသံကုန် ထပ်အော်တယ် ..
ကျွန်တော့် ကို အရူးနည်းနည်းလောက် ရောင်းပါ ..
(၁) ပထမ အရူးကို အရက်တိုက်လွှတ်မယ်
(၂) ဒုတိယ အရူးကို မော်ဖင်းထိုးပေးမယ်
(၃) တတိယ အရူးကို ခေါင်းထဲကျည်ဆံ တစ်တောင့် ပစ်ထည့်လိုက်မယ်
ကျွန်တော့်ကို အရူး နည်းနည်းလောက် ရောင်းပါ ..
ကျွန်တော့်ကို အရူး ဒီထက်ပို ရောင်းပါ ..
ကျွန်တော့်ကို အရူး ကွန်တိန်နာများစွာ ပို့ပေးပါ . . . ။
Posted by phone myint at 4:22 PM3comments: Links to this post
Beyond Pressure is the leading international art festivals in Myanmar.
It is alsoaplatform for the Asian emerging artists to share and
exchange experiences and aspects. This year, 2010 Beyond Pressure
would like to celebrate the third year anniversary with new
initiation, evolvement and extension of public space intoanew era.
We would like to extend our performance art scene inanew audience in
Kan daw Gyi Garden.
Last year, the festival was able to endorse the official permission to
make it inapublic space and could attract public interest. We would
like to strengthen the public awareness and liberation of the art
space. The art festival will be held from 2nd December to 5th
December2- Performance art workshop I
conducted by Chen Jin (China) - 1:00 pm to 5:00 pm, at Dagaung art
December 3- Performance art workshop II
conducted by W.Christiawan (Indonesia) - 1:00 pm to 5:00 pm at Dagaung
December4- Symposium I
By Ronaldo Ruiz (Phillipine), Po Po (Myanmar), Chen Jin (China).
Posted by phone myint at 8:39 PM No comments: Links to this post
Posted by phone myint at 3:21 PM 8 comments: Links to this post
ခေတ်အကြောင်း ပြောပြီးကထဲက မြေခွေးတွေ ဖြစ်သွားကြတာ
တော်သလင်း အကျော် သီတင်းကျွတ် ၊ တန်ဆောင်မုန်း
(အထူးသဖြင့် တန်ဆောင်မုန်း) ရေးရေးပေါ် နေတဲ့ "လ" ကွေးလေးကိုမျှော်ပြီး
လိင်စိတ်ထ ၊ မြူးတူး တက်ကြွနေတဲ့
အမြီးပြတ် ခွေးထီး ၊ ခွေးမတွေ
ခွေးပါစပ်က နတ်စကားထွက်သောခွေး ၊ တောင်ဘက်ကို ပြေးတဲ့ယုန်နဲ့
မြောက်အရပ်ကို ပြေး ကပ်သောခွေး ၊ ဒယီးဒယိုင် ဆင်ခေါင်းကို
မချီနိုင်တော့တဲ့ခွေး ၊တစ်မွန်းတည့် ကောင်းစားအောင် ရူးချင်ယောင်
ဆောင်ပြနေသောခွေး ၊ လေလည်တဲ့ အသံကို နားဝင်ပီယံ ဖြစ်နေသောခွေး ၊
သားရေပေါ်အိပ် သားရေလိပ်ကြီးပါ မျိုချလိုက်သောခွေး ၊ စမုန်ထ အောင် ခုန်
ပြနေသောခွေး ၊ ခွေးမြီးကောက် လည်ပင်းပါ ကျည်တောက်နဲ့ စွပ်ထားရမယ့်ခွေး
အမြီးမျှော်သလို ခရီးတော် နီးရက်နဲ့ ဝေးနေသောခွေး ၊ ခွေး၂ ကောင်
ဟပ်တဲ့ကြားက အန်ဖတ်ပုံ ဖြစ်ချင်နေရှာသောခွေး ၊ ဒန်ခွက်ကို လျှံထွက်အောင်
အကြံခက် အတောင်းအရမ်း ပက်စက် သော ခွေး ၊ မျက်နှာသာပေး ရွှေရေးပန်းကန်ပါ
စားမာန်တက်နေသောခွေး ၊ လျှောက်ပြန် သံပေး ခြေအေး ဝမ်းယောင်
ဟောင်လွန်းသောကြောင့် လူအလေးစား မခံရသော ခွေး ၊ ခွေးခေတ် ကိုတော့
ရောက်တော့မည်မလွှဲပါ ဆိုသော ခွေး ၊ ဖျာလိုလိပ် ထိပ်ပေါ်တင်ထားလည်း
ပြာပုံပေါ်ဆင်း ဖင်ချင်းပူးနေသောခွေး ။
တော်သလင်းလကျော်ပြီးတာတောင် ခွေးသံပေး၊ခွေးရေးပြ ၊ ခွေးမွေးကင်းစ ၊
ခွေးဂီလာန ပါမကျန် ခွေးသဘင်ဆင်ယင်ကျင်းပ ၊ ခွေးကမြင်းကြောထ ၊ ခွေးပေါင်းခ
တစ်တောလုံးမီးလောင် ၊ တစ်တောင်လုံးမြေခွေးတွေကြီးပဲ
ဟဲ့ခွေး . . . ဟဲ့ခွေး . . . ဟဲ့ခွေး ...။
Posted by phone myint at 3:00 PM2comments: Links to this post
၃၆၀ ဒီဂရီ ဆလင်ဒါပုံလုံးဝန်းသော အရာဝတ္ထုအတွင်း။
စိတ်ဟာ ဆိတ်ငြိမ် တိတ်ဆိတ်။
အတွင်းပိုင်း အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေအထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ခိုးဝင်၊တိုးဝင်။
"အနာဂါတ်ဆိုတာ လင်ကောင်မပေါ်လို့ ဖျက်ချုလိုက်ရတဲ့ ပဋိသန္ဓေပဲပေါ့"။
"တစ်လောကလုံးလင်းပြီး ၊ ငါ့ကျမှမှောင်နေတဲ့ ကံကြမ္မာလိုမျိုးပေါ"့ ။
နာရီသံဟာ ချောင်ပိတ်မိနေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်လို ဆွံ့အ လှဲလျှောင်းနေပြီး ။
ဂြိုဟ်ဆိုးတွေ က လည်ချောင်းကို အလစ်ချောင်းပြီး ပြေးဟပ်တယ်။
၁၄ မိနစ်ခြားတိုင်း ရေဆူဆေးပြားတွေ မျိုချရတယ် ။
ရန်ကုန်ဟာ ရသမျှကုန်နေတာလား ၊ရစရာကုန်သွားလို့ပဲလား။
ခွေခေါက်သွားတဲ့ အရေခွံတစ်ခုကို ထရော်လီပေါ်တင်သွားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
တမြို့လုံးမှာ အနီးကပ်ပေါင်းစရာဆိုလို့ ဆေးလိပ်ခွက်ထဲက ဆေးလိပ်တိုတချို့နဲ့
ရေလာချိန်လေး မီးလာရင် တော်သေးတာပေါ့စိတ်ထားဟာ
ရှည်မျောမျော ရှော့ပင်းမောလ်ကြားမှာ နစ်မြုပ်သွား ပြန်တယ် ။
ကျိုးတိုးကျဲတဲဩဘာသံနဲ့ ဖိတ်ဖိတ်တောက် နေတုန်းပဲပေါ့။
မည်းမှောင်ခြင်းဟာအရက်ဆိုင်ထဲက ပခုံးတွန့်ပြလိုက်တယ် ။
(သူဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ )
အချစ်ရယ် မင်းရယ်သံ လွင်လွင်လေးတောင်
ငွေသံကြေးသံ တချွင်ချွင်နဲ့ လှနေပြန်ပါရော ။
ဘယ်သူ့ကိုမှ မရှင်းပြဖြစ်လိုက်ဘူး ။
Posted by phone myint at 9:15 PM3comments: Links to this post
ငါပေါ့ . . .။ ။
၃၀ရက်၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၀
Posted by phone myint at 8:52 PM2comments: Links to this post
သူမက ကျွန်တော့်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်ကြည့်ခြင်း
ချောကျိနေတဲ့ အကြည့်ကို ဆုပ်ကိုင်မိတော့
သင်္ချာဆန်သော အလင်းရောင် အသွားအပြန် ခရီးအဆုံး
မီးကျီးခဲလို ပူပြင်းသော မျက်လုံးများဖြင့်
သက်ပြင်းရောင် အ၀ိုင်းအ၀န်းထဲမှ သူမ ထွက်ခွာသွားတယ်
မရမ်းရောင် သုတ်လိမ်းထားသော နှုတ်ခမ်းများ
`မင်းကို ငါမြင်ရတယ်´ . . . `မင်းကို ငါမြင်ရတယ်´
မီးလျှံများသည် သူမ၏ ရှည်လျှားသော
ကြေးနီရောင် အသားအရေ ကို ၀ါးမျိုနေတယ်
ထိုနောက် . .
သူမသည် . .
လက်သုတ်ပုဝါများ ၊ အရောင်တင်ထားသော စားပွဲများ
ဟိုတယ်များ ၊ ဘူတာရုံများ
အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သော မှန်ပြတင်းများပေါ်
ကမ္ဘာပေါ်က မြို့ကြီး တစ်ချို့၏ နံရံ၌
အိမ်အကြောင်း အိပ်မက် မက်နေတဲ့
မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်ဟာ
အိပ်ယာပေါ် တလူးလူး တလိမ့်လိမ့်နဲ့
အပြာရောင် ခွေးတစ်ကောင်၏ မျက်လုံးများ ဆိုတဲ့
အရာရာကို လက်မြှောက် အရှုံးပေးသော အပြုံးဖြင့် ပြုံးတော့
သူမ မျက်နှာဟာ နာကြည်းသော တိမ်တိုက်တစ်ခုလို
မည်းမှောင်လို့ . . . ။ ။
Ref: Garcia Marquez -Eyes ofablue dog
(Translated by Mya Than Tint)
Posted by phone myint at 10:44 PM No comments: Links to this post
ဟိုး . . . . အထက်ကို ပစ်တင်
ဟိုး . . . . အ၀ိစိကို ပစ်ချ
သူ့ကြောင့်ပဲ ကျွန်မ အရာရာကို မေ့သွားခဲ့တာ
( ရှင်တို့သိပ်ကြိုက်တဲ့ )
ကျွန်မ ခေါင်းပေါ် သူ့ခံတွင်းထဲက
ဟောကြည့် .. ကျွန်မ ခြေသည်းလေးတွေက စ
`ကျွန်မ ပျော်လိုက်တာ ´
Posted by phone myint at 3:27 PM2comments: Links to this post
ဒီစာမျက်နှာ ပေါ်က ကဗျာရေးချင်နေတဲ့ စိတ်ဟာ
စာရွက်လွတ်တွေ အပေါ်မှာ စိတ်ထဲမှာ
ရှိနေတာ တစ်ခုခုကို ချရေးလိုက်မလို့ပဲ . . .
ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးကို ထိုးကြိတ်ထည့်ထားလို့မရခြင်းပဲ
ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုနဲ့ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်
အသားအရောင် ခွဲခြားမှု ၊ လိင်တူ ချစ်သူများရဲ့အခွင့်အရေး
နိုင်ငံတော် ပျောက်ဆုံးသူများရဲ့ အော်သံ
ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သေးသော ပြဿနာ
ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ လိင်သင်္ကေတ ဟာ
ရွှေမင်းသမီးပါးရိုက်ခြင်းမှသည် ဘလော့များအပေါ် ကူးပြောင်းခြင်း
အယ်လ်ကေးဒါးတွေ မီလျှံနာဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စ
အယ်လ်ပီကဗျာနဲ့ ပို့စ်မော်ဒန် အကြောင်း
ဘလော့ အပေါ်မှာ စာတိုပေစ အနည်းငယ် ရေးပြီး
လူထုဒေါ်အမာလိုလို ၊ဂျာနယ်ကျော် မမလေးလို
ပျော်ရွှင်စွာ သားကောင်ချနင်းသူများ အကြောင်း
ပေါချင်တိုင်း ပေါလို့ရတယ် ထင်နေတဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့
အထင်အရှား မပြနိုင်တဲ့ လူ့ဘဝရဲ့ ဖြစ်တည်မှုများ
မင်းကရော ဘာကောင်လဲ မေးရင်
အကောင်တော့ အကောင်ပဲ ဘာကောင်မှန်းမသိသေးဘူးလို့
စိတ်ရဲ့ အပိုအလျှံများနဲ့ မဆန့်တော့တဲ့
Posted by phone myint at 9:08 PM2comments: Links to this post
ကြည့်နေ မြင်နေကြ မြင်ကွင်းများ
သင်နှင့် သင့်နှုတ်ခမ်းများ၏ ငြီးတွားသံဟာ
ပျင်းရိဖွယ်ရာ တကိုယ်ရည် တေးသွားများ သက်သက်သာ
သံသရာမှာ သုံးကားပေါင်းမိုးလင်းပေါက် ဇတ်လမ်းမျိုးတွေနဲ့လဲ
မာတာ ၊ပီတ မိနှင့်ဖ အား ကျမ်းစာ များမှ မွှေနှောက် ကိုးကား
သင်သာ အရိုးသားဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ချရေးပြခဲ့ဖြင့် ဂုဏ်ယူနိုင်ပါစေ
လမ်းပျောက်သော သားကောင်နောက်သို့ အများယောင်သလို
ကြောင်တောင်တောင် အမောင် တောင်မှန်းမြောက်မှန်း မသိ
လိုက်မိသည့် အကျွန်ုပ်ပင် အပြစ်ရှိသည် ဟု ထင်မိပါသည်
သောက်လက်စ အရက်ခွက် လွတ်ကျခြင်း အမည်ဖြင့်
ရင်နင့်ဖွယ်ရာ စာသားများ ဟန်ဒရက်ပါဆင့်တိတ် ပါဝင်သော
ရှေးဖြစ်ဟောင်း အောက်မေ့ဖွယ်ရာ အနှစ် ၂၀ ရေဒီယို
တေးချင်းများ ထုတ်လွှင့်တော့မည် ဖြစ်ပါသဖြင့်
နားသောတ ဆင်လိုသူ သပ္ပူရိသအပေါင်းမှ
Posted by phone myint at 9:03 AM6comments: Links to this post
Posted by phone myint at 6:11 PM3comments: Links to this post
အနက်ရောင် အဓိက ခြယ်မှုန်းထားသော
အပိုင်းအပိုင်း အစအစ များ ဖွာလန်ကျဲ
အရည်ပျော် ကတ္တရာ လမ်းမကြီးထက်
မီးတောက် မီးလျှံများ လွင့်စဉ်ပျံကြဲ
နီရိုးတို့ ပျော်ကြလေပြီ . . .
၀မ်းနည်းခြင်း မာတိကာ ပါမလာတဲ့
နီရိုးတို့ ပျော်ကြလေပြီ . .
အမုန်း အာဃာတ အစွန်းဖျား၌ ရပ်လျှက်
လူသားခြင်း မေတ္တာတရားကို မေ့ထားလျှက်
လူ့အခွင့်အရေး စာမျက်နှာများ အား
နီရိုးတို့ ပျော်ကြလေသည် . . .
တစ်လုပ် ၊ တစ်ဆုပ် ၊ တစ်ရှိုက် ၊ တစ်ဖွာ
တစ်ဇွန်း ၊ တစ်ယောက်မ စာ
ပေးကမ်း ဝေမျှခြင်းကို မေ့၍
မာသာထရီဇာ အောက်မေ့ဖွယ် ပွဲတော်
ဆင်ယင်နွဲပျော် ပြီးပြီ ဖြစ်၍
ဖြန့်ထားသော လက်ထက် ပိုမိုကောင်းသည်ကို
မေ့ဖျောက်ထားပြီးပြီ ဖြစ်၍ ၎င်း
တင့်တယ်ခြင်း အား ဖြစ်စေသည်ဟု ခံယူပြီး၍ ၎င်း
၎င်း . . . သည် . . . ၎င်း ။ မှ တပါး အခြားမရှိပြီ ဖြစ်၍ ၎င်း ။
ထိုမှ . . ဤမှ . . .၎င်း ။ ၎င်း . . .၎င်း . . ..၎င်း . . .
ထို့နောက် . ..၎င်း ။
နီရိုးတို့ ပျော်ကြလေသည် ။
Posted by phone myint at 4:36 PM7comments: Links to this post
Posted by phone myint at 9:37 AM4comments: Links to this post
တိမ်တွေကို တွဲလဲ ဖြန့်ခင်းထားတဲ့ကောင်းကင်မှာ
လေညှင်းက ဆံပင်တွေကို ဖွဖွလေး ဖြီးသင်ချနေတဲ့ဘီး
ကြယ်အမှုန်အမွှားတွေက မင်းပါးပြင်ထက်မှာ ငြိတွယ်
အလင်းလွန် အမြန်နှုန်း အတိုင်း
အာရုံခံ ကိရိယာ တွေထဲ အတိုင်းအဆ မသိတဲ့
နှုးညံ့မှုတွေ ဖြတ်သန်း ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြ
မိန်းမော မူးယစ် လေဟာနယ်ထဲမှာ လွင့်မျောသွားလိုက်ပုံက
အထိန်းကွပ်မဲ့ စွန်တွေလို ..
ကြားခံ ကွက်လပ်တွေ ဖြည့်စွတ်စရာ မရှိတဲ့အထိအောင်
အပို အလို မရှိ ကွက်တိ
ပင့်သက်များ မချနိုင် မချီနိုင် တော့တဲ့ အထိ
သွေးကြောများ ပြေလျှော့ နှုန်းခွေ ပျော့ကျသွားတဲ့ အထိ
ညစ်နွမ်းဖွယ် အလင်းပွင့် ရောင်စုံကြားထဲ
မင်းနဲ့ ငါနဲ့ ကြားထဲက
ကောင်းခန်းတွေကြီးပဲ ပါတဲ့ အဲ့ဒီဇတ်လမ်းကို
နေ့စဉ်ရက်ဆက် မငြီးငွေ့တမ်းရိုက်ချင်တယ် . . . ။
Posted by phone myint at 8:44 AM3comments: Links to this post
( ၀မ်းနည်းကြေကွဲ ရခြင်း ၊ ကိုယ်စိတ် နှလုံး ညိုးနွမ်းရခြင်း တို့သည်
ချစ်ခြင်း သာလျှင် အမွန်အစ ဖြစ်ကုန်၏ ။ ) (ဓမ္မပဒ)
အလွမ်း ဟာ... ဇီဝိန်ကြွေတော့မဲ့ ငါးလို ဖျတ်ဖျတ်လူးနေတယ်
အလွမ်းဟာ... နက်စ် ကော်ဖီနဲ့ စီင်္းကရက် ကြိုက်တယ်
အလွမ်းက....သူ့ ကိုယ်သူ အနုပညာစိတ်ရှိသူ လို့ထင်နေတယ်
သူ့ရဲ့အတိုင်း၊ အရှည်ကို မြစ်တစ်စင်းနဲ့ ခိုင်းနှိုင်း တတ်တယ်
ထုထည်ကိုတော. သူကိုယ်တိုင်တောင် မမှန်းဆ တတ်ဘူးတဲ့
( ၂၀၀ဂ ခုနှစ်တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာဟောင်းလေး တပုဒ်ပါ .. ဆားချက်တယ် ပဲပြောပြော ခုအချိန်မှာ တစုံတရာကို စူးစူး ရှရှ လွမ်းနေလို့ ပြန်တင်လိုက်တယ် .. ။ )
Posted by phone myint at 7:00 PM 8 comments: Links to this post
တတိတိနဲ့ တိုက်စား ၊ တတိတိနဲ့ ကုန်ဆုံး ၊ တိတ်တိတ် နေခြင်းမှာ တွန်းတွန်း တိုက်တိုက်
အနန္တ စကြ၀ဠာ နဲ့ချီပြီး မေတ္တာပို့ . .
ဂလက်ဇီ နဲ့ ခိုင်းနှိုင်း . . ဆဲ ရေး တိုင်း ထွာ (ဆယ်ရေးတရာ)
ဂလို ဘယ် လိုက်ဇေးရှင်း ယဉ်ကြီးမှ ပဲ့ ပဲ့ ကျ လာသော
ဖရီး ဒမ်း . . . ဖရီးဒမ်း. . . လို့ အမြီးယမ်းပြီးပဲ အော်ရတော့မလိုလို..
သံသယ ဆိုတာ စတစ်ကာ ကပ်ထားတဲ့ မှန်မည်းကြီး လို
မင်း နဲ့ ငါကြားမှာ ခြားထားတဲ့ အရာပါ . . . . .
အဲ့ဒီလို မဆို လိုပါဘူးကွာ . . .
အခန်းလွတ် တခုရှိတယ် မြန်မြန် ခုန်ဝင်လိုက်
ခင်းထားတဲ့ စားပွဲမှာ ထိုင် .. မီနူးကတ်ကို ဖတ် ..
၃၁ ဘုံလုံးက အကောင်းဆုံး ဒုက္ခ ဟင်းလျှာနဲ့ မင်းကို တည်ခင်း ဧည့်ခံမယ် . . .
အချိုပွဲက မသေခင် စပ်ကြား ရလာတဲ့ သု . . . ခ . . . ချမ်း . . . သာ . . .။
Posted by phone myint at 7:14 PM3comments: Links to this post
ခင်ဗျားခြေရာ လက်ရာတွေ ဒီကဗျာ မှာ ကျန်နေခဲ့သေးလား
Posted by phone myint at 7:48 PM4comments: Links to this post
ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နည်း ပရိုဂရမ်အသစ်
ခဏ ထားခဲ့လိုက်ပါ . . .
စုတ်တီး ၊ စုတ်ပဲ့ အတွေးတွေ . . .
"ကျမ သမီးလေး ဆယ်တန်းမှာ အော်လ်ဒီထွက်မှ ဖြစ်မယ် " ဆိုတာတွေ
ဒီပွဲကို ပြတ်အောင် ရိုက်လိုက်ရင်
အပေါ်ကားကို ၂၀၀ အလိုက်ပေးလဲမယ် ဆိုတာတွေ . . .
ချိတ်ထားလိုက်တဲ့ ဇယားလေး က
အကိတ်ကြီးပဲ ၊ လန်းတယ် ဆိုတာတွေ . . .
WTC အပိုင်းအစတွေ တောင်
ဘာမက်စရာရှိလဲ . . . .
ဘင်လာဒင်လဲ ဒုလ္လဘ တခုပဲ
ဂန္ဒီကြီးလဲ ဒုလ္လဘ တခုပဲ
ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော် ရေခဲစိမ် ဘီယာ ကြိုက်ပြီး
အာသာပြေ ကဗျာရေးတယ် ဆိုတာလဲ ဒုလ္လဘ တခုပဲဟာ
ဘာမက်စရာရှိလဲ . . .
ခုဆို . . . ကျနော်တုိ့ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ပါတယ်
ပရိုပိုဇယ် ကျလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝါဒီတယောက်လို
ပလတ်စတစ် ဆန့်ကျင်ရေး သမားတဦးလို
NGO တခုက မန်နေဂျာ တယောက်လို
ကွန်နက်ရှင် ကောင်းတော့လဲ ပျော်ပါတယ်
ရတနာပုံ ချန်ပီယံ ဖြစ်တာလဲ ပျော်ပါတယ်
အနိစ္စ ( အမြဲမရှိ ) ဆိုတဲ့တရားဟာ
ကျနော်တို့နဲ့ ယဉ်ပါးနေတဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါက်ပဲဟာ . . .
ကျနော်တို့ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ကြရပါတယ် . . . ။ ။
Posted by phone myint at 7:35 PM9comments: Links to this post
"လူစီ" . . .
မင်း နောက်မှာ လူတွေတန်းစီနေတုန်းပဲလား . . . "လူစီ"
မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကြောင့် အထုပ်တွေလဲ ကုန်ခဲ့ပါပြီ . . . "လူစီ"
အခြေခံ စစ်ရေးပြ သင်တန်းမှာလို မင်းရှေ့မှာ သတိစွဲပြီး
တန်းစီပြရဦးမှာလား . . . "လူစီ"
ဆိုရှုယ် နက်ဝေါ့ကင်း ဆိုက်တွေ မှာ ဖန်ကလပ်ထောင်ပြီး
လူစည်ကားချင်နေတာလား . . . "လူစီ"
မင်းရဲ့ အရယ် ၊ အပြုံးတွေဟာ လိင်ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ် . . ."လူစီ"
လိင်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေလဲ တနေ့တခြား ဆန်းသစ်လာတယ် . . "လူစီ"
မင်းရဲ့ အိပ်ယာခင်းတွေကို မတွန့်ကြေအောင် ထိန်းသိမ်း ပါဦး . . ."လူစီ"
မင်းအခန်း က ထပြန်လာတဲ့ အမျိုးသား တယောက်ရဲ့ နံနက်ခင်း ကို
ဂွဒ်မောနင်းလို့ နှုတ်ဆက်ပါတယ် . . . "လူစီ"
ပေါ်ပီပန်းတွေ ပွင့်ချိန်မှာ ကုတ်ကင်း ကို သတိရ တဲ့
ကိုလံဘီယာသား တယောက်လို ငါ . . မင်းကို သတိရနေပါတယ် . . ."လူစီ"
အခု . . . ငါတော်တော်ဖျားနေပါပြီ . . . "လူစီ"
ငါ . . . အန်ချလိုက်တိုင်း . . မင်းနာမည်တွေပဲ ထွက်ကျလာတယ် . . . "လူစီ"
ငါ . . . အသုဘ ရှုရန်လာတဲ့အခါ အနက်ရောင် ဝမ်းဆက်နဲ့
နှင်းပန်းတပွင့် ကို ရင်ဘတ်မှာ ထိုးခဲ့ပါ . . . "လူစီ"
ဂွဒ်ဘိုင် မိုင်ရို့စ် လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် . . . "လူစီ"
( အဲ့ဒီညက ငါ့သူငယ်ချင်း ငါ့အခန်းကို မလာခဲ့ဘူး . . "လူစီ" )
Posted by phone myint at 6:59 PM3comments: Links to this post
ဘ၀ ကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့
ကဲအခုတော့ . . .
Posted by phone myint at 5:42 PM 1 comment: Links to this post
တကိုယ်တော် ငြိမ်ဆိတ်တဲ့ စိတ်နဲ့
ဝိဉာဉ် ကို ခြေဖျားထောက် ၊ လမ်းလျှောက်လာတဲ့
ရှင်ပြန် ထမြောက်လာခဲ့တယ် . . .။
Posted by phone myint at 2:39 AM5comments: Links to this post
Posted by phone myint at 1:15 AM5comments: Links to this post
မင်းမုန်းတယ်ပြောတဲ့နေ့က ငါ့လက်ဖျံရိုးမှာ ဆေးမင်ကြောင်အသစ်တိုးတယ်
ငါဟာ . . .မင်းခြေဖမိုးအောက်မှာပဲ
ကောင်းကင်ဘုံနဲ့မြေကမ္ဘာကို တညတာနဲ့ ငါဖန်ဆင်းတယ်
ငါ့ဥယျာဉ် ကို မင်းက အပိုင်စားရသူ
ငါ့ နိုင်ငံတော်မှာ သက်ဦးဆံပိုင်
ငါ့ဒေတာဘေ့စ် ပရိုဖိုင်းမှာ ဖျက်လို့မရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်
ငါ့နံနက်ခင်းတိုင်းမှာ ဖြာနေတဲ့ နေရောင်ခြည်ဟာ .မင်း
ငါ့အလံတော်ဟာ မင်းကြောင့် တလူလူလွင့်လို့
ငါ့လက်ဖျံရိုးမှာ မင်းနာမည်ကို ဆေးမင်ကြောင်ထိုးတယ် . . . ။
Posted by phone myint at 1:06 AM 8 comments: Links to this post
တတိတိနဲ့ တိုက်စား ၊ တတိတိနဲ့ ကုန်ဆုံး ၊ တိတ်တိတ်...
ဒီကဗျာ ခင်ဗျား ဘယ်က ရလာတာလဲ ( အပါယ်လေးဘုံသား ကဗျာ ...